top 5 Cities Best Si Bixiya Christmas | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Cities Best Si Bixiya Christmas
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareenka Safarka Iswidhan, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
2018 waa ku dhawaad ​​dhamaadkii ah, taas oo macnaheedu noqon karaa oo kaliya in Christmas dhow yahay! Dadka ayaa weli aan helin diyaar u, laakiin dadka safarka ah, waxaa la gaaray waqtigii sare si ay u qorsheeyaan safar. Haddii aad raadineyso weeyna magaalada xaq u leedahay inaad ku bixisaan Christmas ee, aan heysano kugu daboolay.
Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa liis faahfaahsan oo ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee ku qaataan Christmas ee. Waa maxay more, waxaan sheegi doonaa wax walba oo xiiso aad halkaas ka qaban karto, laakiin ka sii muhiimsan, sida loo helo in magaalooyinkan tareen.
Amsterdam meel gaar ah oo ku saabsan liiska this sida xaflado waxaa ka badan sidii hore ka bilaabi. Laga bilaabo November, dadka ka Amsterdam bilaabaan inay u dabaal Christmas iyo dhammaan xilliga qaboobaha kale dhacdooyinka.
The Museum Square bartamaha magaalada ekaysiiyaa ah tuulada Christmas ekayd. Halkan waxa aad ku raaxaysan karaan mid ka mid ah suuqyada ugu wanaagsan ee Christmas in Europe. Waxaa ka sii badan u qalmo Amsterdam sida mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee ku qaataan Christmas.
Amsterdam waxaa aad loogu yaqaanaa dhismayaasha ay qurux iyo kanaalada badan, laakiin magaalada bixisaa badan oo dheeraad ah. Waxaad ku raaxaysan karaan kobaha barafka, Ferris raacid wheel, cuntada fantastic iyo noocyo kala duwan oo cabitaan, iyo wax ka badan.
Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan Christmas xitaa ka dib markii maalintii ugu shishaysa. Maalinta ku xigta ka dib markii Christmas, dadka Amsterdam dabaal maalinta Boxing.
Waxaad booqan kartaa Amsterdam tareen ka dhowaad meel kasta oo Europe. saldhiga dhexe xiriiriya Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, iyo qaar badan oo. Waxaa jira khadadka si joogto ah ugu iyaga ka mid ah iyo kuwo kale oo badan magaalooyinka dalka Netherlands. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad la tareenada Yurub aad ku raaxaysan karaan dhawr ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Bixiya Christmas ee 1 safar.
Magaalooyinka ugu wanaagsan ee Bixiya Christmas, qaado qabow – Stockholm, Sweden
Waxaa laga yaabaa in baraf, laakiin waxaad weli u jecel doonaa in aad dooratay in ay ku sugan Stockholm for Christmas. Sweden waa wadan si ku noqon inta lagu guda jiro fasaxa qaboobaha maxaa yeelay, dalka Iswiidan waxay isku derejeeyo.
magaalada laftiisa waxaa si qurux badan qurxiyey inta lagu guda jiro fasaxa, iyo waxay bixisaa wax labada casriga ah iyo dhaqanka. Waa doorasho top sida mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee ku raaxaysan Christmas.
Waxaa jira nalalka meel kasta oo suuqyada Christmas on jidadka cunto kulul iyo cabitaanka. Waxaad noqon doontaa waalan ma in ay isku dayaan ka rootida qorfe oo immika la dubay delicious ama gingerbreads in mid ka mid ah dubayaasha badan ee magaalada! Sweden ma bixiyaan wax badan oo jidka doorashooyin cunto kala duwan, laakiin waxaad u baahan tihiin wax kale mar waxaad isku dayi bolle qorfe la koob kulul ee kafeega.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa fursad in ay soo booqdaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan jirka ee Europe. Markaas waxaad istaagi kara in wax yaab leh eegaya ah kanaalada kala duwan oo sir ah, channels webiga, iyo in ka badan.
Waxaad ka meelo badan oo Europe ka heli kartaa in ay Stockholm tareen sida Sweden ku xiran yahay iyada oo loo marayo Copenhagen. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tihiin in ay qaataan a tababaraan si ay qaar ka mid ah qaybaha waqooyiga ee dalka. Waana halka Lights Northern waa ifka iyo ugu quruxda badan.
Budapest, caasimada Hangari iyo magaaladeeda ugu quruxda badan, waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee ku qaataan Christmas ee loogu talagalay sababo dhowr ah. Magaalada waxay ku taal wabiga Danube waxayna siisaa xoogaa raacid doon cajiib ah. Waxaad ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah dhismayaasha taariikhiga ah ka arki kartaa laga bilaabo webiga.
Intaas waxaa sii dheer, aad leedahay doonaa si ay u arkaan Buda hanqadhka Castle Dhismaha Baarlamaanka. Sida waayo, waxyaalaha aad samayn karto xilliga qaboobaha, waxaa jira dhowr. From fuushan streetcars si barafka on baraf dhib Budapest Park ee, mar walba waxaa jira waxyaabo badan oo si halkan ku samaynayno. Sidoo kale, ha ilaawin inaad booqato suuqa Christmas ee Vorosmarty Square iyo cadaalad Christmas ee Basilica ee.
saldhiga dhexe tareenka taas oo u eg waxa si toos ah oo ka soo baxay buug Harry Potter yahay ee xarunta. Waxaa isku xira Budapest in inta badan magaalooyinka waaweyn ee Yurub oo dheeraad ah. Laba saldhig oo dheeraad ah sidoo kale waxay leeyihiin wax badan oo ka mid ah khadadka tareenada, qaadashada safraya iyo Budapest neecaw.
Magaalooyinka ugu wanaagsan ee Bixiya Christmas, qaado gaar ah – Strasbourg, France
Strasbourg ma aha oo kaliya doorashada ugu fiican ee ay u qaataan Christmas, laakiin waxa ay sidoo kale magaalada kirismaska. Waxaad aan ka maqnaan karaa booqanaya magaalada this qurux badan at Christmas.
Strasbourg faanaa suuqyada Christmas 400-sano jir ah, kaas oo si cad u sharxayaa muhiimadda ay leedahay Christmas magaalada this.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira wax badan oo kale wax si ay u arkaan iyo samayn. Waxaad booqan kartaa Cathedral Strasbourg haybad ama araggiisu ku 18th qarnigii Qaraqmeen Rohan. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa in wax yaab leh geedka weyn Christmas dhow Sharing Village, ama mushaaxaan agagaarka bartamaha magaalada. Waxa kaliya in qaar waa in aad marnaba heli doontaa caajisin magaaladan sixir.
Strasbourg waxa uu ku yaalaa ee xarunta of Western Europe, ee xuduudda la leh Germany. Its meel u saamaxaaya in ay ku xidhmaan inta badan magaalooyinka Yurub. Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay in loo helo tareenka si ay magaalada noqon doonaa mid aad u fudud.
Magaalooyinka ugu wanaagsan ee Bixiya Christmas iyo meesha ugu fiican ee ku nool – Geneva, Switzerland
Mid ka mid ah goobaha ugu fiican Yurub, haddii aanay dunidu, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waa Switzerland. Taasi waa sababta Geneva, mid ka mid ah magaalooyinka Mogadishu Switzerland, ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee ku raaxaysan Christmas xaqiiqo ah.
Magaaladu waxay ku dul bangiyada ee Lake Geneva, iyo marka jiilaalka yimaado, dhammaan gudubno waa dhuxul. Kumanaan ka mid ah nalalka ku iftiimin ka dukaamo dhow, oo xero, dhismayaasha dadweynaha, iyo qurxinta Christmas.
Mid ka mid ah sababaha aan gaaray Geneva for Best Cities in Bixiya blog Christmas ahayd in Cuntada caashaqi jiray waa in ay sidoo kale ku rayrayn sida pre ee magaalada-suuqa Christmas cuntada oo dhan bixisaa dunida. Waa maxay more, waxaad tagi kartaa shopping Socodka at Street ee, ka dibna booqo qaar ka mid ah calaamadaha ugu weyn. Kuwaas waxaa ka mid Palace ee ee Qaramada Midoobay, St Pierre Cathedral, Jet Water, iyo in ka badan.
Waxaa jira tareen si joogto ah magaalooyinka kale ee Switzerland sida Bern iyo Zurich in aad qaadi karto si Geneva. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa jira wax badan oo ka mid ah tareenada iyo ka Italy socday, France, Germany, iyo in ka badan. kuwan raadkaygay tagaan magaalooyinka sida Lausanne, Paris, Venice, Milan, Fiican, Verona, iyo qaar badan oo. Intaa waxaa dheer, saldhiga tareenka dhexe ee xarunta aad u of magaalada.
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay, liis dhamaystiran oo ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ku qaataan Christmas. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan safarka tareenka iyo magaalooyinkii iyo ka, si xor ah u La xiriir Save A tareenka goor kasta.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Hungary #traveleurope europetravel sweden talooyin trainjourney Tranride tareenada caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka safarka tareenka safarka travelamsterdam travelfrance travelswitzerland